၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၉ ရက်မှ ၁၂ ရက်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာသွန်းပေးမယ့် မုန်တိုင်း…မိုးလေဝါသ အထူးသတင်း…. – Pyit Time Htaung
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၉ ရက်မှ ၁၂ ရက်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာသွန်းပေးမယ့် မုန်တိုင်း…မိုးလေဝါသ အထူးသတင်း….
By Pyit TimePosted on June 8, 2021
လာမည့် ၂၀၂၁ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့အတွင်း ဘင်္ဂလားပင် လယ်အော် မြောက်ပိုင်းတွင် Depression အဆင့် မုန်တိုင်းငယ် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး မုတ်သုန်လေအား အလွန်ကောင်းလာကာ
တနင်္သါရီတိုင်း မွန်ပြည်နယ် မုတ္တမပင်လ ယ်ကွေ့ ကရင် ပြည်နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးများစွာရွာ သွန်းနိုင်ပြီး ကျန်တစ်နိုင်ငံလုံးမှာလည်း မိုးရွာသွန်းဖွယ် ရှိပါတယ်။
ပင်လယ်ပြင် ခရီးအတွက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်း ချက်(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်း၊အ ရှေ့အလယ် ပိုင်းနှင့် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အား နည်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားင်လယ်အော်တွင် တိမ်အနည်းငယ်မှ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။
ရန်ကုန်မှ တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်း တစ်‌လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ခ ရီးအ တွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် ယနေ့မွန်းတည့်မှ နောက်(၂၄)နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းချက် မိုးလေ ဝသအ‌ခြေအနေ နေရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။အမြင်တာ။
(၄)မိုင်၊ မိုးရွာစဉ် (၁)မိုင်ခန့်။ရေပြင်လေ။ အနောက်(သို့) အနောက်တောင်၊ တစ်နာရီ ပင်လယ်မိုင် (၅-၁၀)မိုင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ (၂၅)မိုင်။လှိုင်းအ‌ခြေအနေ။ လှိုင်းအနည်းငယ်မှ အသင့်အတင့်ရှိမည်။လှိုင်းအမြင့်။ (၄)ပေမှ (၇)ပေခန့်။ ရန်ကုန်မှ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက် ပင်လယ်ပြင်ခရီးအ တွက် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် မိုးလေဝသအ‌ခြေအနေ။
ယနေ့မွန်းတည့်မှ နောက်(၂၄)နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းချက်နေရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ အမြင်တာ။ (၄)မိုင်၊ မိုးရွာစဉ် (၁)မိုင်ခန့်။ရေပြင်လေ။အ နောက် (သို့) အနောက်တောင်၊ တစ်နာရီ ပင်လယ်မိုင် (၅- ၁၀)မိုင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ (၂၅)မိုင်။ ယခုလို မိုးလေဝသ အခြေအနေကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်နော်။
အားလုံးသိေ အာင်လဲ မျှဝေပေးြ ကပါအုံးနော်။crd to
လာမည့္ ၂၀၂၁ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕မွ ၁၂ ရက္ေန႕အတြင္း ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ Depression အဆင့္ မုန္တိုင္းငယ္ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚနိုင္ၿပီး မုတ္သုန္ေလအား အလြန္ေကာင္းလာကာ
တနသၤါရီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ မုတၱမပင္လ ယ္ေကြ႕ ကရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုးမ်ားစြာ႐ြာ သြန္းနိုင္ၿပီး က်န္တစ္နိုင္ငံလုံးမွာလည္း မိုး႐ြာသြန္းဖြယ္ ရွိပါတယ္။
ပင္လယ္ျပင္ ခရီးအတြက္ မိုးေလဝသ ခန႔္မွန္း ခ်က္(၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၁၀:၃၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အ‌ေျခအေန ကပၸလီပင္လယ္ျပင္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္း၊အ ေရွ႕အလယ္ ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ မုတ္သုံေလ အား နည္းေနၿပီး၊ က်န္ဘဂၤလားင္လယ္ေအာ္တြင္ တိမ္အနည္းငယ္မွ တိမ္အသင့္အတင့္ ျဖစ္ထြန္းေနပါသည္။
ရန္ကုန္မွ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္း တစ္‌ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ျပင္ခ ရီးအ တြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္ ယေန႕မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ခန႔္မွန္းခ်က္ မိုးေလ ဝသအ‌ေျခအေန ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာမည္။အျမင္တာ။
(၄)မိုင္၊ မိုး႐ြာစဥ္ (၁)မိုင္ခန႔္။ေရျပင္ေလ။ အေနာက္(သို႔) အေနာက္ေတာင္၊ တစ္နာရီ ပင္လယ္မိုင္ (၅-၁၀)မိုင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ (၂၅)မိုင္။လွိုင္းအ‌ေျခအေန။ လွိုင္းအနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္ရွိမည္။လွိုင္းအျမင့္။ (၄)ေပမွ (၇)ေပခန႔္။ ရန္ကုန္မွ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ျပင္ခရီးအ တြက္ မိုးေလဝသခန႔္မွန္းခ်က္ မိုးေလဝသအ‌ေျခအေန။
ယေန႕မြန္းတည့္မွ ေနာက္(၂၄)နာရီအတြင္း ခန႔္မွန္းခ်က္ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာမည္။ အျမင္တာ။ (၄)မိုင္၊ မိုး႐ြာစဥ္ (၁)မိုင္ခန႔္။ေရျပင္ေလ။အ ေနာက္ (သို႔) အေနာက္ေတာင္၊ တစ္နာရီ ပင္လယ္မိုင္ (၅- ၁၀)မိုင္၊ တစ္ခါတစ္ရံ (၂၅)မိုင္။ ယခုလို မိုးေလဝသ အေျခအေနကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။
အားလုံးသိေ အာင္လဲ မွ်ေဝေပးၾ ကပါအုံးေနာ္။crd to
Posted in WeatherTagged မိုးေလ၀သသတင္း
Previous post မိုးလေဝါသ အထူးသတင်း….၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၉ ရက်မှ ၁၂ ရက်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးရွာသွန်းပေးမယ့်မုန်တိုင်း
Next post ကိုယ့်မြန်မာပြည်အရေးကို ကူညီပေးနေတဲ့ ကိုရီးယား အတွက် သွေးလှူပြီးကျေးဇူးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့ ကိုရီးယားရောက်မြန်မာပြည်သူများ